Mitemo Yebasa - ICO Chinyorwa Pamhepo
Binance Smart Chain Yakavakirwa ICOs
Ziva Wako Mutengi (KYC)
Chero kushandiswa kweICOListingOnline.com kunoenderana nemitemo nemamiriro anotevera. Nekutarisa kana kushandisa masevhisi eICOListingOnline.com, unobvuma kusungwa nemitemo iyi nemamiriro.
1.0 Kushandisa Kunogamuchirwa
1.1 Unobvuma kuti haungatyori chero mutemo, chibvumirano, chivakwa, kana imwe yechitatu-bato kodzero kana kuita tort, uye kuti ndiwe chete unokonzeresa maitiro ako uchishandisa saiti yedu. Pasina kudzikamisa huwandu hwezvambotaurwa, unobvuma kuti hauzo:
Shandisa saiti yedu nenzira inogona kukanganisa, kuvhiringidza, kana kutadzisa vamwe vashandisi kushandisa saiti yedu, kana iyo inogona kukuvadza, kuremadza, kuremedza, kana kukanganisa mashandiro esaiti yedu neimwe nzira;
Shandisa yedu saiti kubhadhara, kutsigira, kana neimwe nzira kuita mari-laundering kana chero chimwe chiitiko chisiri pamutemo;
Shandisa chero robhoti, dandemutande, chinokambaira, chinotsika, kana imwe nzira yekushandisa kana interface isina kupihwa nesu kuti uwane yedu saiti kana kutora data;
Kuedza kudzikisira chero zvemukati-kusefa matekiniki atinoshandisa, kana kuyedza kuwana chero sevhisi kana nzvimbo yeyedu saiti iwe yausina mvumo yekuwana
Gadzira chero yechitatu-bato kunyorera iyo inosangana neyedu saiti pasina mvumo yedu yakanyorwa kare;
Ipa ruzivo rwenhema, rwusina chokwadi, kana runotsausa;
Kurudzira kana kukurudzira chero munhu wechitatu kuti aite chero chezviitiko zvinorambidzwa pasi pechikamu chino
Shandisa iyo Saiti chero nzira inoputsa chero anoshanda emunharaunda, yenyika, federal kana mutemo wepasirese kana mutemo;
Kopa, shandisa, kuzivisa kana kugovera chero ruzivo rwunowanikwa kubva kuSiti, kungave zvakananga kana kuburikidza nevechitatu mapato, pasina mvumo yedu;
Shandisa, taura kana kugovera chero data rakawanikwa mukutyora aya maMitemo;
Kutyora kodzero dzevaridzi dzepfuma, kusanganisira kodzero dzekopimendi, zvibvumirano, zvitengesi, zvakavanzika zvekutengeserana, kana dzimwe kodzero dzekodzero;
Kutyora midziyo yedu yehungwaru kana dzimwe kodzero, kusanganisira, pasina muganho, (i) kuteedzera kana kugovera zvinhu zvedu kana (ii) kuteedzera kana kugovera tekinoroji yedu, kunze kwekunge yaburitswa pasi pemarezinesi evhu; (iii) kushandisa izwi rekuti "ICOListingOnline.com" kana marogo edu mune chero zita rebhizinesi, email, kana URL, pasina mvumo yedu;
Zvoreva kana kutaura kuti iwe wakabatana kana kubvumidzwa neICOListingOnline.com pasina mvumo yedu yakajeka;
Rent, renda, chikwereti, kutengesa, kutengesa / kutengesa zvakare kuwana iyo Saiti kana data rakanangana;
Ita nenzira isiri pamutemo kana isiri yehunyanzvi zvine chekuita neMasevhisi edu, kusanganisira kusavimbika, kushungurudza kana kusarura;
Tumira zvisirizvo, zvinosvibisa zvinonyadzisa, zvinotyisa, zvine ruvengo, kutyisidzira kana zvimwe zvisina kukodzera zvemukati kana kuburitsa zvichemo zvemunhu kana makakatanwa;
Kushungurudza, kushungurudza kana kukuvadza mumwe munhu;
Tumira kana kutumira chero kushambadza kusingatenderwe kana kusatenderwa, "junk mail," "spam," "cheni tsamba," "mapiramidhi zvirongwa," kana chero nzira yekukumbira isingatenderwe nesu;
Buritsa ruzivo iwe iwe usina mvumo yekuzivisa (senge zvakavanzika ruzivo rwevamwe;
Tumira chero chinhu chine mavhairasi esoftware, makonye, ​​kana chero imwe kodhi inokuvadza;
Kugadzira, kutsigira kana kushandisa software, zvishandiso, zvinyorwa, marobhoti, kana chero imwe nzira kana maitiro (kusanganisira zvinokambaira, mabhurawuza plugins uye mawedzero, kana chero imwe tekinoroji kana basa remaoko) kukwenya Saiti kana neimwe nzira kukopa data kubva kuSiti;
Kupfuura kana kutenderedza chero ekuwana ekudzora kana Saiti yekushandisa miganho;
Reverse mainjiniya, kuparara, kupaza, kusanganisa, kana neimwe nzira kuyedza kuwana kodhi yekodhi yeSiti kana chero tekinoroji inoenderana iyo isiri yakavhurika sosi;
Wongorora kuwanikwa kweSiti, mashandiro kana mashandiro echinangwa chekukwikwidza;
Shingairira mu "kuronga," "mirroring," kana neimwe nzira kuenzanisa kutaridzika kana basa reSiti;
Pinda iyo Saiti kunze kwekunge kuburikidza nematanho akapihwa zvakajeka nesu, senge mafoni ekushandisa (kana paine) uye ICOListingOnline.com;
Kukurudzira chero chinhu chekuchengetedza cheSiti; uye / kana
Kukanganisa nekushanda kwe, kana kuisa mutoro usinganzwisisike paSiti (semuenzaniso, spam, kuramba basa rekurwisa, mavairasi).
2.1 Unobvuma uye unobvuma kuti izvo zviri ICOListingOnline.com zvine ruzivo uye unoshandisa saiti nenjodzi yako wega.
2.2 Iwe unobvuma uye unobvuma kuti iwe waverenga, unonzwisisa, uye wakasungwa neRisipo uye maWarranty ese akatumirwa pane ino saiti.
2.3 Unobvuma zvinotevera njodzi zvine chekuita nemari yemari iyo ICOListingOnline.com isiriyo:
Mari chaiyo haina mari zviri pamutemo, haina kutsigirwa nehurumende, uye maakaunzi uye zviyero zvekukoshesa hazvisi pasi peFederal Deposit Insurance Corporation kana Securities Investor Protection Corporation kuchengetedzwa kana kuchengetedzwa kwakafanana mumatunhu asiri eUS maakaundi.
Shanduko dzemitemo uye dzemutemo kana zviito padunhu, federal, kana pasirese zvinogona kukanganisa kushandiswa, kuendesa, kuchinjana, uye kukosha kwemari chaiyo.
Shanduko mumari chaidzo dzinogona kunge dzisingachinjiki, uye, nekudaro, kurasikirwa nekuda kwekunyepedzera kana netsaona kutengeserana kunogona kusakwanisa kuwanikwazve.
Zvimwe zvekushandurwa kwemari zvinoonekwa sezvinoitwa kana zvanyorwa pagwaro reruzhinji, risiri iro zuva kana nguva inotangwa nemutengi.
Iko kukosha kwemari chaiyo kunogona kutorwa kubva mukuenderera mberi kwekuda kwevatori vechikamu pamusika kuchinjana fiat mari yemari chaiyo, izvo zvinogona kukonzeresa mukana wekusingaperi uye kurasikirwa zvachose kweukoshi hwerimwe mari chaiyo kana musika weiyo chaiyo mari ukanyangarika.
Iko hakuna vimbiso yekuti munhu anogamuchira iyo chaiyo mari sekubhadhara nhasi acharamba achidaro mune ramangwana.
Iko kusagadzikana uye kusafungidzira kwemutengo wemari chaiyo inoenderana nemari ye fiat kunogona kukonzera kurasikirwa kukuru.
Hunhu hwemari chaiyo hunoreva kuti chero matambudziko eetekinoroji anowanikwa neICOListingOnline.com anogona kudzivirira kuwana kana kushandiswa kweyechokwadi yevatengi mari.
Chero bond kana trust account inochengetwa neICOListingOnline.com kuitira kuti vatengi vayo vange vasingakwanise kubhadhara zvese zvinoraswa nevatengi.
Mushandisi anobvuma njodzi dzakakomba dzinotevera kune chero kushandiswa kweICOListingOnline.com Services uye anobvuma pachena kusabata ICOListingOnline.com mhosva chero ipi yenjodzi dzinotevera dzikaitika:
2.3.1 RISKI YEMAITIRO EZVO ZVINOGONESESA MUMWE KANA KUTI ZVIMWE ZVINHU:
ICOListingOnline.com inogona kukanganiswa nemubvunzo mumwe chete kana yakawanda kana zviito zvekutonga, izvo zvinogona kutadzisa kana kudzikamisa kugona kweICOListingOnline.com kuenderera mberi nekuvandudza ICOListingOnline.com, kana inogona kukanganisa kana kudzikamisa kugona kweMushandisi kushandisa ICOListingOnline .com.
2.3.2 RISIKI RENYAYA, ZVINOKOSHA ICOListingOnline.com NETWORKS:
Izvo zvinokwanisika kuti mamwe maICOListingOnline.com-based network anogona kusimbiswa, ayo anoshandisa iyo imwechete yakavhurwa sosi sosi kodhi uye yakavhurwa sosi protocol iri pasi peICOListingOnline.com Services.
2,3.3 RISIKI KUTI ICOListingOnline.com SERVICES, SEZVAKAVANDUDZWA, HAIZOSANGANA NEZVINOTarisirwa NEMUSERI:
Mushandisi anoziva kuti ICOListingOnline.com masevhisi ari kuvandudzwa uye anogona kuita shanduko dzakakura asati aburitswa. Mushandisi anobvuma kuti chero tarisiro maererano nemafomu uye mashandiro eICOListingOnline.com masevhisi akaitwa neMushandisi anogona kusasangana pakuburitswa kweICOListingOnline.com masevhisi, kune chero huwandu hwezvikonzero zvinosanganisira shanduko mukugadzirwa uye kuronga zvirongwa uye kuuraya yekumisikidzwa kweICOListingOnline.com masevhisi.
3.0 Yemagetsi Notices
3.1 Kubvumirana kuElectronic Delivery. Unobvumirana uye unobvuma kugamuchira zvemagetsi kutaurirana, zvibvumirano, magwaro, mareti, ziviso, uye kuzivisa (pamwe chete, "Kutaurirana") iyo ICOListingOnline.com inopa maererano nekushandisa kwako saiti. Unobvuma kuti ICOListingOnline.com inogona kukupa Kutaurirana uku nekukutumira paICOListingOnline.com, nekukutumira tsamba paemail kero yaunopa, uye / kana nekutumira SMS kana meseji kunhamba mbozhanhare yaunopa. . Yako yekutakura mameseji akajairwa, data uye imwe mitero uye mubhadharo zvinogona kunyorera kune chero nhare mbozha. Iwe unofanirwa kuchengetedza makopi eElectronic Communications nekudhinda pepa kopi kana kusevha yemagetsi kopi. Iwe unogona zvakare kutibata nesu kukumbira mamwe emagetsi makopi eCommunication kana, pamubhadharo, mapepa emakopi eCommunications (sekutsanangurwa pazasi).
3.2 Hardware uye Software Zvinodiwa. Kuti uwane uye uchengetedze zvemagetsi Kutaurirana, iwe unozoda komputa ine internet kubatana ine yazvino webhu bhurawuza ine makuki akagoneswa uye 128-bit encryption. Iwe zvakare unozofanirwa kuve neyakakodzera email kero pane faira ine ICOListingOnline.com uye uve nenzvimbo yekuchengetedza yakakwana yekuchengetedza yapfuura Kutaurirana kana iyo yakaiswa purindaini kuti uprinte iwo
3.3 Kukumbira Mapepa Mapepa. Kana, mushure mekubvuma kugamuchira Kutaurirana nemagetsi, ungade kopi yepepa reKutaurirana isu takambokutumira, unogona kukumbira kopi mukati memazuva makumi matatu kubva musi watakapa Kutaurirana kwauri nekutibata nekunyora. Kuti isu titumire mapepa makopi kwauri, unofanirwa kunge uine kero yazvino yemugwagwa pane faira ine ICOListingOnline.com. Ndokumbira utarise kuti ICOListingOnline.com inoshanda chete online uye zvinorema zvikuru kwatiri kuburitsa mapepa emakopi eCommunications. Naizvozvo, kana iwe uchikumbira mapepa mapepa, iwe unonzwisisa uye unobvuma kuti ICOListingOnline.com inogona kukubhadharisa inonzwisisika yekugadzirisa muripo kune peji rega reKutaurirana rakakumbirwa
3.4 Kugadziridza Ruzivo rwekutaurirana. Ibasa rako kuchengeta email kero yako uye/kana nharembozha nhamba pafaira ine ICOListingOnline.com iri kusvika parizvino kuitira kuti ICOListingOnline.com ikwanise kutaura newe zvemagetsi. Iwe unonzwisisa uye unobvuma kuti kana ICOListingOnline.com ikakutumira Kukurukurirana kwemagetsi asi iwe haugamuchire nekuti email yako kero kana nhare mbozha pafaira haina kururama, yapera, kana kuvharirwa nemupi webasa rako, kana kuti haugone gamuchira zvemagetsi Kukurukurirana, ICOListingOnline.com ichanzi yakupa Kukurukurirana kwauri. Ndokumbira utarise kuti kana ukashandisa spam sefa inovharira kana kutumirazve maemail kubva kune vanotumira asina kunyorwa mubhuku rekero reemail, unofanira kuwedzera ICOListingOnline.com kubhuku rako rekero reemail kuitira kuti ugone kugamuchira Kukurukurirana kwatinotumira kwairi. iwe.
4.0 Zvechitatu-bato Zvemukati
4.1 Mukushandisa yedu saiti, iwe uchaona zvemukati zvinopihwa nevechitatu mapato, kusanganisira zvinyorwa, ongororo, makomenti, maonero, kuongorora, uye zvinongedzo kumapeji ewebhu emapati aya, kusanganisira asi asingagumiri kumablog, maforamu, nharaunda, uye masocial network. Hatidzori kana kubvumidza chero chechitatu-bato zvemukati uye hatisi ivo vane basa nazvo, kusanganisira pasina muganho zvinhu zvingave zvinotsausa, zvisina kukwana, zvisirizvo, zvinogumbura, zvisina hunhu, kana zvimwe zvinopesana. Hatina mhaka kana mutoro wekurasikirwa kana kukuvadzwa kwerudzi rupi zvarwo rwunotsigirwa nekuda kwechinhu chechitatu chiri paICOListingOnline.com, uye iwe unonzwisisa kuti kutarisa kwako uye kushandisa kwako kwechitatu-bato zvemukati, uye kudyidzana kwako nevechitatu mapato ari zvakabatana neyedu saiti, zviri panjodzi yako wega.
5.0 KUSANANGURA KWEMAWARANTI
KUNYANYA SEZVINOGONESEDZWA ZVINONYANYA KUNYORA NESU, MABASA ETHU ANOPIWA PAMUSORO SEZVINO "UYE" ZVINOGONESEKA "NZVIMBO. TINOTAURA PASI, UYE WEMAI, ZVESIMBISO ZVEZVINHU ZVINHU, KUNYANYA KURATIDZA KANA KUSIMBISWA, KUSANGANISWA, PASINA MIKADZO, ZVINOGONESESWA ZVEMAOKO, KUKOSHESA CHINANGWA CHINODZIDZISWA, KUSVIMBISA KUNYENGETEDZA KUKANGANISWA KWEVANHU. ZVIRI MUKATI, UYE ZVINHU ZVIMWE ZVIRI MUKATI PANO.
Imi vanobvuma kuti INFORMATION munovachengeta KANA KUTAPURIRANA KUBURIKIDZA SERVICES vave zvachose AKARASIKA OR dzakaora KANA kwenguva isina kukonzerwa ZVAKASIYANA-SIYANA. ZVINOKONZERA, ZVINOSANGANISIRA SOFTWARE kukundikana, Protocol RINOCHINJA BY THIRD Party rubatsiro, INTERNET achidzima kakawanda, Simba MAJEURE NEMATAMBUDZIKO KANA dzimwe njodzi ZVINOSANGANISIRA THIRD- CHIKAMU DDOS KURWADZA, KURONGWA KANA KUTI KUSARATIDZWA KUCHENGETEDZA, KANA ZVIMWE ZVINOKONZESA KUNYANYA PASI KANA KUNZE KUNZE KWEDU DZIDZO. MUNO KUSANGANA PASI PAKUDZIDZA NOKUCHENGETEDZA DUPLICATE MACOPI EYENYU INFORMATION YAMUNOTORA KANA KUTI MUTSHANDURESE KUPFUURA NESHURE DZEDU.
6.0 KUSANGANISWA KWEMAITI
KUNE MAXIMUM ANOGONESESWA ANOGONESESWA NOMUTEMO UNOSHANDISWA, PASI NEZVAKAITIKA VANOGONESA ICOListingOnline.com KANA VATENGESI VAYO, VANOTIWANISA, KANA VANHU VANOREMEKEDZA, VADZIDZISI, VAMWE, VABATI VEMAHARA, Vashandi kana Vamiririri, VANOGONESESA, VANOGONESWA , KANA ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA KUNYANYA KUSANGANISIRA ASI ASI KUNOGONESERWA KUKUVADZWA KOMUNHU, KURWADZWA NEMATAMBUDZIKO, KANA KUTAMBUDZIKA KWEZVINHU, KANA KUKUVADZIRA KURASIKWA KWEMAITIRO EBHIZIMISI, KURASIKWA KWESANGO DZINODZIDZISWA, KURASIKWA KWEZVIMBO, DZIMAI DZIDZISO, BHOSI KANA KURASIKIRA KWEMAHARA BHUSI PAMUSORO PAMUSORO POKUSHANDISWA KWE KUSHANDISWA KANA KUSATSIGIRA KUSHANDISA MABASA KUNYANYA KANA KUTI KUSINA KUTYA, KUNYANYA KANA ICOListingOnline.com YAKANYANZISWA NEZVINOGONESEKA ZVAKAKONZESA ZVAKADARO. HAPANA CHIITIKO CHICOListingOnline.comZVINHU ZVESE ZVAKAWANDA PASI KANA KUTI UNOBVA KUSHANDISA KWAKO KUSHANDISWA KWAKAITWA NET MURIPO WAKABHADZWA ICOListingOnline.com KUSHANDISA KWAKO BASA RAKANAKA PAMUSORO KUTI RIMWE RAKASIMBISWA, KANA US $ US $ 10.00 HAPANA CHIMWE CHIMWE CHOKUSHANDISWA KWEVATengi KWEBASA.
Unobvuma kudzivirira, kuregerera, uye kubata zvisina njodzi ICOListingOnline.com (uye mumwe neumwe wevakuru vedu, vatungamiriri, nhengo, vamiririri, vashandi, vashandi, mainishuwarenzi, magweta, vanopa, uye vanobatana) kubva kune chero chikumbiro, kuda, chiito, kukuvara, kurasikirwa , mutengo, kana mari, kusanganisira pasina muganho mari inokodzera yemagweta, zvichibuda kana zvine chekuita ne (a) mashandisiro ako, kana maitiro maererano nekushandisa saiti yedu; (b) chero mhinduro yaunopa; (c) kutyora kwako aya mamiriro uye mamiriro; kana (d) kutyora kwako chero kodzero dzemumwe munhu kana chimwe chinhu. Kana iwe uchisungirwa kutipa mhosva, isu tichava nekodzero, pasarudzo yedu yega, kutonga chero chiito kana kuenderera (nemari yedu) uye kuona kana tichida kuzvigadzirisa.
8.0 Kuregeredza kweMasevhisi
Isu tinogona, mukuziva kwedu chete uye pasina mutoro kwauri, uine kana pasina chiziviso chisati chaitika uye chero nguva, kugadzirisa kana kurega, kwechinguva kana zvachose, chero chikamu chesaiti yedu kana masevhisi.
Tichava nekodzero dzakasarudzika, kusanganisira kodzero dzese dzepfuma, kune chero mhinduro, mazano, mazano, kana rumwe ruzivo kana zvinhu zvine chekuita neICOListingOnline.com yaunopa. Chero mhinduro yaunotumira haina kuvanzika uye ichave yega yega yeICOListingOnline.com. Tichava nekodzero yekushandisa zvisina kudzivirirwa nekuparadzirwa kwemhinduro dzakadaro kune chero chinangwa, kushambadzira kana zvimwewo, pasina kubvuma kana muripo kwauri. Iwe unoregedza chero kodzero iwe yaungave unayo kumhinduro (kusanganisira chero kodzero dzekopa kana kodzero dzetsika). Usatitumire mhinduro kana iwe uchitarisira kubhadharwa kana kuda kuenderera kuve wega kana kutora kodzero mune chero mazano aunotitumira. Isu tinochengeta kodzero yekuzivisa hunhu hwako kune chero wechitatu bato ari kutaura kuti chero zvemukati zvakatumirwa newe zvinoita kutyora kodzero dzadzo dzezvivakwa, kana kodzero yavo yekuvanzika. Tine kodzero yekubvisa chero posvo iwe yaunogadzira pawebhusaiti yedu kana, mumaonero edu, yako positi isingaenderane nemitemo yezviri mukati yakatarwa muchikamu chino.
10.0 Kopiraiti uye Dzimwe Kodzero dzePfuma
Kunze kwekunge zvichiratidzwa neimwe nzira, kodzero dzese dzekopimendi uye dzimwe kodzero dzezvivakwa mune zvese zvirimo uye zvimwe zvinhu zviri pawebhusaiti yedu kana zvakapihwa zvine chekuita nemasevhisi edu, kusanganisira, pasina muganho, iyo ICOListingOnline.com logo uye zvese zvigadzirwa, zvinyorwa, mifananidzo, mifananidzo , ruzivo, data, software, mafaera enzwi, mamwe mafaera, uye sarudzo uye marongero azvo (pamwe chete, "ICOListingOnline.com Zvishandiso") ndiyo midziyo yeICOListingOnline.com kana marezinesi edu kana vanotengesa uye inodzivirirwa nemitemo yese yekopiraiti. uye mimwe mitemo yekodzero dzepfuma. Nekudaro tinokupa yakaganhurirwa, isingasarudzike uye isiri-yakapihwa rezinesi yekuwana uye kushandisa iyo ICOListingOnline.com Zvishandiso zveako zvemukati kana zvemukati bhizimusi rekushandisa. Iyo rezinesi iri pasi pemitemo iyi uye mamiriro uye haibvumidze (a) chero kutengesa kweI ICOListingOnline.com Zvinhu; (b) kugovera, kuita kweruzhinji, kana kuratidzwa kuruzhinji kwechero ICOListingOnline.com Zvishandiso; (c) kugadzirisa kana neimwe nzira kushandisa chero zvigadzirwa kubva kuICOListingOnline.com Zvishandiso, kana chero chikamu chayo; kana (d) chero kushandiswa kweICOListingOnline.com Zvishandiso kunze kwekuitira zvinangwa.
"ICOListingOnline.com," iyo ICOListingOnline.com logo, uye chero imwe ICOListingOnline.com chigadzirwa kana mazita ebasa, marogo, kana maslogani anogona kuoneka pane yedu saiti zviratidzo zveICOListingOnline.com uye zvinogona kunge zvisina kuteedzerwa, kuteedzerwa, kana kushandiswa, yakakwana kana chikamu, pasina mvumo yedu yakanyorwa yakanyorwa. Iwe haugone kushandisa chero chiratidzo, chigadzirwa, kana zita rebasa reICOListingOnline.com pasina mvumo yedu yekutanga yakanyorwa, kusanganisira pasina muganho chero metatags kana imwe "zvinyorwa zvakavanzika" uchishandisa chero chiratidzo, chigadzirwa, kana zita rebasa reICOListingOnline.com. Uye zvakare, kutaridzika nekunzwa kwenzvimbo yedu, kusanganisira ese misoro yemapeji, giraidhi yemifananidzo, mabhatani emifananidzo, uye zvinyorwa, ndiyo chiratidzo chebasa, chiratidzo, uye / kana dhizaini rekutengeserana reICOListingOnline.com uye inogona kunge isingateedzerwe, kuteedzerwa, kana inoshandiswa, izere kana chikamu, pasina mvumo yedu yakanyorwa yakanyorwa. Zvimwe zvese zviratidzo, zvakanyoreswa zvekutengeserana, mazita echigadzirwa, uye mazita emakambani kana marogo akataurwa kuburikidza neyedu saiti inzvimbo yevaridzi vawo. Referensi kune chero zvigadzirwa, masevhisi, maitiro kana rumwe ruzivo, nemazita, chiratidzo, trademendi, mutengesi, kana neimwe nzira hazvireve kana kureva kutsigira, kutsigira, kana kurumbidza nesu.
12.0 Yakavanzika Mutemo
Ndokumbira utarise kune yedu Yakavanzika Policy kuti uwane ruzivo nezve maunganidziro atinoita, mashandisiro, uye kugovana ruzivo rwako.
13. Hapana Basa rekutarisa
Unobvuma kuti isu hatisi mhosva yezvinhu zvinopihwa nevamwe. Hatina basa rekutarisa zvemukati zvaunogona kupa kana kutumira, asi isu tine mvumo yekuramba kutumira kana kugadzirisa zvakatumirwa zvirimo. Isu tinochengetera kodzero yekubvisa chero zvemukati chero chikonzero chero nguva.
14.0 Mutemo Unoshanda
Iwe unonzwisisa uye unobvuma kuzviisa pasi pehutongi hwega uye hwakasarudzika hwematare emunyika, nyika, dunhu, kana dunhu rinotemerwa chete neICOListingOnline.com kugadzirisa chero nyaya iri pamutemo inomuka kubva mumirau nemamiriro aya kana zvine chekuita nekushandisa kwako ICOListingOnline.com . Kana dare redzimhosva rine masimba richitonga kuti kupihwa kupi kwechibvumirano hakushandi, ipapo kupihwa kwacho kuchabviswa kubva mumitemo nemitemo nemitemo nemitemo inosara icharamba ichishanda zvine mutsindo.
15.1 Chibvumirano Chero; Kurongeka kwePamberi. Aya mazwi nemamiriro ezvinhu ane chibvumirano chose, uye anotsiva kwese kunzwisiswa kwepamberi uye panguva, pakati pemapato maererano nekushandiswa kweICOListingOnline.com. Aya mazwi nemamiriro hazvishandure iwo mamiriro kana mamiriro echimwe chibvumirano chemagetsi kana chakanyorwa chaungave uine ICOListingOnline.com. Kana paine kupokana pakati pemitemo nemamiriro uye chero chimwe chibvumirano chaungave nacho neICOListingOnline.com, zvirevo zvechimwe chibvumirano zvinodzora chete kana aya mamiriro uye mamiriro akanyatso kuziviswa uye akaziviswa seakakundwa nechimwe chibvumirano.
15.2 Kugadziridzwa. ICOListingOnline.com inochengetera kodzero yekumisikidza ayo mamiriro uye mamiriro ekushandisa chero nguva pasina ziviso kunze kwekuisa izvo zvazvino mazwi nemamiriro pane saiti. Iyo yazvino vhezheni yematemu uye mamiriro ichagara ichiwanikwa kuICOListingOnline.com. Vashandisi vanokurudzirwa kutarisa mazwi nemamiriro ezvinhu nguva dzese pavanoshandisa saiti.
15.3 Kuregererwa. Kukundikana kwedu kurovedza muviri kana kunonoka kushandisa chero kodzero pasi pemitemo nemamiriro aya hakushande sekuregererwa kwayo kana semuganho pakushandisa zvakafanana kana kodzero yakafanana mune ramangwana.
15.4 Severability. Kana chero eaya maratidziro nemamiriro akawanikwa asina chikamu kana zvachose asingashande kana asingamanikidzwe nedare redzimhosva rine hunyanzvi, huchokwadi kana kumanikidzwa kwechero ipi yeiyi mirawu nemamiriro aya acharamba achishanda zvizere, pamwe nechipo chinowanikwa kusashanda zvachose kana kusamanikidzirwa kucharamba kuchishanda uye kuchimanikidzirwa kusvika pamwero uzere unobvumidzwa nemutemo.
15.5 Basa. Iwe haugone kuendesa kana kuendesa chero ako kodzero kana zvisungo pasi pemitemo iyi uye zvisati zvaitika usati wawana mvumo yakanyorwa kubva kuICOListingOnline.com, kusanganisira nekushanda kwemutemo kana maererano nechero shanduko yekutonga. ICOListingOnline.com inogona kuendesa kana kuendesa chero kana ayo ese kodzero dzayo pasi pemitemo nemamiriro aya, akazara kana chikamu, pasina kuwana mvumo yako kana kubvumidzwa.
15.6 Misoro. Misoro yezvikamu ndeye nyore chete uye haizoshandiswe kudzika kana kuita zvikamu zvakadaro.
15.7 Kupona. Iko kushanda kweaya mazwi uye mamiriro achapona chero kumiswa kana kupera kweaya mazwi uye mamiriro sekudikanwa kuti avape iwo azere simba uye mhedzisiro.
15.8 Simba Majeure. Hatisi kuzova nemhosva yekunonoka, kukundikana mukuita kana kukanganisa kwebasa izvo zvinokonzeresa zvakananga kana kuti zvisina kunangana kubva kune chero chisakiso kana chimiro chinopfuura kwedu kwatinogona kudzora, kusanganisira asi kusingagumi, chero kunonoka kana kukundikana nekuda kwechiito chero chipi zvacho chaMwari, chiito chehurumende. kana vakuru vemauto, kuita kwemagandanga, kukanganisa kwevanhu, hondo, kuramwa basa kana imwe gakava rebasa, moto, kukanganiswa mukuterevhizheni kana Internet services kana network network services, kukundikana kwemidziyo uye / kana software, dzimwe njodzi kana chero chimwe chiitiko chiri pamusoro pedu kudzora zvine musoro uye hazvizokanganisa kushanda uye kumanikidza kwechero zvasara.
16.1 Kukodzera. Kuti munhu ave anokodzera kuvhura iyo ICOListingOnline.com account uye shandisa masevhisi, unofanirwa kunge uine makore angangoita gumi nemasere, kana zera reruzhinji mudunhu rako rekugara.
17.0 Yega Ongororo
17.1 Iwe Unotora Kuitisa Yako Yega Tsvagiridzo. ICOListingOnline.com zvemukati zvakagadzirirwa kushandiswa uye zvinofanirwa kushandiswa kune ruzivo ruzivo chete. Iwe unomiririra kuti iwe unotsvagisa wega uye kuongorora usati waita chero kudyara kunoenderana nemamiriro ako ega. Iwe unofanirwa kutora yakazvimirira yezano rezvemari kubva kune nyanzvi maererano, kana kuzvimiririra kutsvagurudza uye kuongorora, chero ruzivo urwo rwaunowana paICOListingOnline.com uye unoshuvira kuvimba nezvazvo, kungave kuri nechinangwa chekuita sarudzo yekudyara kana neimwe nzira.
18.0 Hapana Mutero kana Zano reMutemo
18.1 ICOListingOnline.com Haipezi Zano reMutero kana Zano reMutemo. ICOListingOnline.com haina kupa accounting mabasa kana kuraira. Isu hatisi maakaundendi kana magweta. Hapana zvirimo pane saiti zvinoumba - kana zvinofanirwa kunzwisiswa senge zvinoumba - zvemutemo kana mutero kuraira. Isu, saka, tinokurudzira kuti iwe utsvage yakazvimirira kuraira nekuita ane rezinesi nyanzvi.
19.0 Hapana Zano Rekudyara Riri Iro
19.1 ICOListingOnline.com Haipe Vanopa Mazano Ekudyara kana maBrokering Services. ICOListingOnline.com haisi mubatsiri wezvekudyara kana mutengesi wekudyara. Hapana zvirimo pane saiti zvinoumba - kana zvinofanirwa kunzwisiswa senge zvinoumba - kurudziro yekupinda mune chero kuchengetedzeka kwekushambadzira kana kudyara, kana kutsigira, kurudziro kana chiyero chechero chirongwa kana kudyara. Isu hatipe zvinokurudzirwa zvakasarudzika kana maonero nezvekuti chirongwa kana chirongwa chekudyara chakakodzerwa nezvinodiwa zvemari zvemumwe munhu.
18.1 ICOListingOnline.com Haipezi Zano reMutero kana Zano reMutemo. ICOListingOnline.com haina kupa accounting mabasa kana kuraira. Hatisi maakaundendi kana magweta. Hapana zvirimo pane saiti zvinoumba - kana zvinofanirwa kunzwisiswa senge zvinoumba - zvemutemo kana mutero kuraira. Isu, saka, tinokurudzira kuti iwe utsvage yakazvimirira kuraira nekuita ane rezinesi nyanzvi.
Bitcoin Kune Vanotanga
Bitcoin Halving - Iyo Halving Cycle Inoshanda Sei uye Nei Yakakosha?
Nzira yekugamuchira Bitcoin muchitoro changu? Nhungamiro Yekubhadharwa muBTC
Chii uye sei Bitcoin Mining Inoshanda. Zvese Nezve Maitiro ekuchera Bitcoins?
Bitcoin Zviri pamutemo here? A 2021 Update paNyaya
Chii chinonzi Bitcoin? Nhoroondo, Hunhu, Zvakanakira, uye Zvakaipa
Bitcoin ATMs: A Beginner's Guide kune Bitcoin ATMs
Satoshi Nakamoto ndiani? Mugadziri weBitcoin
Chii Chinangwa cheBitcoin: Kufungidzira kana Kudhora?
Maforamu eBitcoin: Nhungamiro Yevanotanga PaKukurukurirana neBTC
Bitcoin Inogamuchirwa Pano: Mabhizinesi Anogona Sei Kutanga neBitcoin?
Chii Chekutenga neBitcoin?
Nzira yekutengesa Bitcoin?
Maitiro Ekutenga Bitcoin: Maitiro Akanakisa, Kwaunotenga, Mazano
Bitcoin Wallets: Zvese Zvaunoda Kuziva
Chii chinonzi Bitcoin blockchain? Nhungamiro yeTekinoroji Kuseri kweBTC
Chii chinonzi Bitcoin uye Inoshanda Sei?
Cryptocurrencies: Ndezvipi uye Digital Mari Inoshanda Sei?
Chii chinonzi Uchapupu hweStake (PoS)
Ndapota shandisai munda uyu usina chinhu
Usapotsa Nhau Dzazvino!
Hukuru! Tarisa inbox yako kuti uone kunyoreswa kwako.
ICO Kunyora E-mail:
Telegraph Chat Tsigiro:
ICO Chinyorwa Pamhepo yakasarudzika ICO chiyero uye inonyora chikuva uye blockchain nharaunda ine vanowedzera vashandisi zuva nezuva.
Inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuburikidza nehupenyu chat kana teregiramu kana iwe uchida Kunyora yako ICO kana uchida ICO Yekusimudzira Services.
Copyright © 2022 ICO Chinyorwa Pamhepo. All Rights Reserved.
Unoda Ico Kukurudzira?
Tarisa maSevhisi edu